PS Foamed Sary Frame Extrusion Line - China PS Foamed Sary Frame Extrusion Line mpamatsy, Factory –Jwell
PS Foamed Sary Frame Extrusion Line
YS andian-dahatsoratra PS foamed profil extrusion, dia misy extruder visy tokana sy ilay mpiara-extruder manokana, miaraka amin'ny fitoeran-drano mangatsiaka, rafitra milina fanoratana mafana, esorina ny unit sy ny stacker. Ity tsipika ity miaraka amin'ny fanaraha-maso inverter ABB AC, mitazona hafanana RKC sns. Miaraka amin'ny fiasa amin'ny plastika tsara, fahaiza-manao avo sy fahombiazan'ny milamina, sns. fisehoana, fampisehoana marin-toerana, fandidiana marina sy mora. Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny kodiarana vita amin'ny embossing dia afaka miasa amin'ny mombamomba samihafa ny milina. Miara-miasa amin'ny extruder lehibe sy ireo fitaovana fanondranana hafainganam-pandeha hafa, ity tsipika ity dia malaza amin'ny tsipika famokarana farany.
Masinina fanidiana hop
Haingam-pandeha Single Screw Extruder PE / PP Double Wall Corrugated Pipe Production Line
Fitaovana amin'ny visy sy barika amin'ny famolavolana tsindrona